12nd Collective Maha Kathina donation ceremony held at the Office of the Auditor General of the Union
12nd Collective Maha Kathina donation ceremony of the office of the Auditor General of the Union was held at the assembly hall of the Office the Auditor General of the Union, office building No.12, Nay Pyi Taw at 9:30 a.m on 1 November, 2019. Maha Kathina robe and offertories, kyats 5,684,550 in cash and worth kyats 4,172,278 in kind, totaling amount kyats 9,856,828 were offered to the monks of the Bayargyi and the Yadanar Bhumithara monasteries. Venerable Sayadaws recited the Paritta Suttas, preachedasermon and merits for the donations made were shared.
ညွှန်ကြားရေးမှူးများ စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းနှင့်စီမံရေးရာကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခြင်း
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၁။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက် ( အင်္ဂါနေ့ ) နံနက် ၉ : ၃၀ မှ ညနေ ၆ : ၀၀ နာရီ အထိ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ စစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းနှင့် စီမံရေးရာကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးသည့်အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့်ရုံးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်- ၂၃၂ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ( ၁၇ ) ရက် ၁။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ( ၁၇ ) ရက်နေ့ နံနက် ( ၁၀ : ၀၀ ) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး စုပေါင်းခန်းမ၌ စာရင်းစစ် - ၁ များ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းအမှတ်စဉ် - ၃၅ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် တက်ရောက်၍ သင်တန်းဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ( ၁၇ ) ရက် ၁။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ( ၁၇ ) ရက်နေ့ နံနက် ( ၁၀ : ၀၀ ) နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး စုပေါင်းခန်းမ၌ စာရင်းစစ် - ၁ များ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ် - ၃၅ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် တက်ရောက်၍ သင်တန်းဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။